आज घट्यो सुनको मूल्य, प्रतिताेला कति ? – Online Khabar 24
आज घट्यो सुनको मूल्य, प्रतिताेला कति ?
सुनको भाउ थाहा पाउनु अघि यो सुन संग संबन्धित खबर
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार सपनामा देखिने सबै कुराले हामीलाई केही न केहि संकेत गराइरहेको हुन्छ।
सपनाको सम्बन्ध हाम्रो भित्री मन वा आत्मासँग जोडिएको छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। कहिलेकाँही सपनामा एउटा कुरा बारम्बार देखि रहन्छ भने यसको मतलब सपनाले हामीलाई केहि संकेत दिन खोजि रहेको हुन्छ। तर हामी यसलाई बुझ्न भने सक्दैनौ।
केही सपनाले भने, जीवनमा राम्रो संकेत पनि दिने गर्दछ। धेरै पटक सपनामा गहना तथा सुन देखा पर्दछ र यसको आफ्नै महत्त्व रहेको हुन्छ। यदि सपनामा सुन देखियो भने जान्नुहोस्, यसले तपाईको जीवनमा के अर्थ राख्दछ र यसले के संकेत दिन खोजेको छ….सपनामा अधिक सुनका गहनाहरु देखेमा, तपाई कुनै विवाह समारोह आदिमा सहभागी हुदै हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ, जसमा तपाईको पैसा पनि खर्च हुनेछ।
सपनामा, सुनको एक सानो टुक्रा देखा पर्यो भने तपाईको घरमा कोहि बिरामी हुन गइरहेको र पैसा खर्च हुने संकेत गराउँदछ। सुनका गहनाहरु किन्दैगरेको देख्नु भएमा, चाँडै तपाईको भाग्य खुल्दै छ र तपाईको जीवनमा प्रगति हुदैछ भन्ने बुझ्नु पर्छ। कसैबाट सुन प्राप्त गर्नुको मतलब, तपाईको सम्पत्ति बढिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ।
कसैले तपाईलाई सुन उपहार दिन्छ भने, तपाइको व्यवसायमा राम्रो सफलता हुने संकेत मानिन्छ। सपनामा आफूले सुनका गहना लगाएको देख्नुभएमा, तपाईको बिवाहित जीवन वा तपाईको काममा समस्या आउने संकेत दिएको हुन्छ। सपनामा कुनै पनि रुपमा सुन दिनु भनेको पैसा गु माउने संकेत मानिन्छ।
नेपाली बजारमा अाज सुनको मुल्य, आज (साेमबार) नेपाली बजारमा सुनकाे मूल्य घटेकाे छ । आइतबारको तुलनामा आज सुन प्रतिताेला एक सय रूपैयाँले घटेकाे नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएकाे छ ।
महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला एक सयले घटेर ९० हजार ६०० कायम भएको छ । छापावाल सुन आइतबार प्रतितोला रु ९० हजार ७०० मा कारोबार एको थियो ।यस्तै आज तेजाबी सुन प्रतितोला ९० हजार १५० मा कारोबार हुँदैछ, जुन आइतबार प्रतितोला ९० हजार २५० मा कारोबार भएको थियो ।
महासङ्घले अन्तरराष्ट्रिय बजार मूल्यका आधारमा नेपालमा दैनिक सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्य तोक्ने गर्छ । महासङ्घले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आज चाँदीको मूल्य इतबारको तुलनामा पाँच रूपैयाँले बढेको छ । चाँदी आइतबार प्रतितोला एक हजार १७५ मा कारोबार भएको थियो भने आज प्रतितोला एक हजार १८० मा कारोबार हुनेछ ।
Prevअजय देवगनका कारण ४९ वर्षीया तब्बू अवि’वाहित ! कसरी जान्नुस
nextपूजा विना प्रकाश भोकै !